Philippe wuxuu ku dhawaaqay tartan caalami ah ee fallaadha - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Philippe wuxuu ku dhawaaqay tartan caalami ah ee fallaadha
Philippe wuxuu ku dhawaaqay tartan caalami ah ee fallaadha
Édouard Philippe ayaa Arbacadii ku dhawaaqay dhamaadka Golaha Wasiirada oo bilaabay tartan caalami ah oo dib loogu dhisi doono isgoyska Notre-Dame Cathedral, oo habeenkii isniinta ku soo booday.
Tartanka caalamiga ah iyo canshuur dhimista gaar ah: laba fikradood oo la ansixiyey inta lagu jiro Golaha Wasiirada si ay u caawiyaan dib u dhiska Notre-Dame Cathedral. Madaxa dawladda Édouard Philippe ayaa ku dhawaaqay Arbacada, 17 April, bilawga "tartan dhismaha caalamiga ah ee dib u dhiska xawaaraha" ee Notre-Dame de Paris, oo lagu gubay dabkii dhacay habeenkii Isniinta.
Hadafku waa in la siiyo "Notre-Dame talaabo cusub oo loogu talagalay farsamooyinka iyo qodobada waqtigeena", ayuu ku dhawaaqay, ka dib markii golaha wasiirrada loo cayimay dhismaha cathedral .
>> Inaad akhrido: Notre-Dame de Paris: caqabadaha dib-u-dhiska
Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in biilka la soo bandhigi doono todobaadka soo socda si uu u siiyo "qaabdhismeed sharci" ah oo loogu deeqo dib u dhiska Notre-Dame.
biilka wuxuu bixin doonaa% a 75 hoos canshuur gaar gaar ah oo loogu deeqo shakhsi ah si euros 1 000, dhanka ah 66% ka baxsan lacagtaas, halka "ganacsatada ka faa'iideysan doona dhimista cashuurta, ayaa sheegay in xayaysiin in xaaladaha hadda jira, "ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha.
Kulanka lagu furayo dib-u-dhiska galabtii Arbacada
Afar urur (Fondation Notre-Dame, Fondation du Patrimoine, Fondation de France iyo Center des Musées nationaux) ayaa ka masuul ah ururinta deeqda dib u dhiska ee Notre-Dame de Paris. Bogagga internetka ee ururadani waxaa laga heli karaa si toos ah ama website (www.gouvernement.fr/rebatirnotredame) ayaa Arbacadii ku dhawaaqay xukuumadda.
Kulan ay wada guddoomeen Emmanuel Macron for "bilaabeyna u dhiska of Notre Dame de Paris" in la qabto gelinka dambe ee 16 00 pm, at Elysee. Duqa magaalada Paris Anne Hidalgo, Agaasimaha Guud ee UNESCO Audrey Azoulay, Archbishop ee Paris Bishop Michel Aupetit iyo Stephane Bern, mas'uul ka ah hidaha iyo madaxweynaha ee xarunta taxadiri qaranka Philippe Bélaval.
Inkasta oo Madaxweynaha Jamhuuriga ahi uu sheegay habeennimadii Talaadada in Notre-Dame dib loo dhisi doono muddo shan sano ah, ku dhawaad ​​hal bilyan oo doolar oo deeq ah ayaa loo ballanqaaday in ka yar saacadaha 48.
Qodobka Source: https://www.france24.com/fr/20190417-direct-edouard-philippe-france-conseil-ministres-reconstruction-notre-dame
Xubnaha Xafiiska Goboleedka ee SDF waxay diideen go'aannada Guddiga Fulinta Qaranka ee Xisbiga
Doorashooyinka Gobol / Robert Bapooh Lipot (MP Upc): "waxaan u baahanahay dib u furida gobollada"